Izizathu ezi-5 zeNtengiso ye-B2B yokuDibanisa iiBhotshi kwiQhinga labo lokuThengisa ngeDijithali | Martech Zone
I-intanethi ichaza ngokulula i-bots ukuba zizicelo zesoftware eziqhuba imisebenzi ezenzekelayo yeenkampani kwi-intanethi.
Iibhotshi bezikhona kangangexesha elithile ngoku, kwaye ziye zavela kwinto ababeyiyo. Iibhotshi ngoku zinikwe uxanduva lokwenza uluhlu olubanzi lwemisebenzi yoluhlu olwahlukeneyo lwamashishini. Nokuba siyalwazi utshintsho okanye hayi, i-bots ziyinxalenye ye umxube wentengiso ngoku.
Iibhothi zibonelela ngesisombululo esifanelekileyo kwiimveliso ezijonge ukunciphisa iindleko kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle. Xa u qala ishishini kwi-Intanethi kwaye ungene kwintengiso yedijithali, unokugqibela ngokungazi uchithe imali eninzi kwintengiso, ukuthengisa, ukuthengisa kunye nengxelo kunokuba kufanelekile. Iibhotshi zitshiphu kakhulu ukuseta kwaye zinokucwangciswa ngokulula.
Ngenxa yokuxhamla kwabo kunye nokuphela kwesibonelelo, i-bots yokuthengisa iyindlela eyaziwayo oomatshini abazisebenzisayo namhlanje. Iibhotshi zizinto zakho zokudlala ezinokucwangciswa ukwenza nawuphi na umsebenzi owufunayo kubo.
Impazamo yomntu iyancitshiswa kwaye ukusebenza ngokukuko kwexesha liqinisekisiwe ngokusetyenziswa kwebhot.
Ngaba ujonga iindlela zokuzenzela umkhankaso wentengiso yedijithali kunye nokunciphisa iimpazamo?
Ngaba uphefumlelwe zizibonelelo ezinokubonelelwa zi-bots?
Ukuba ewe, ngoko ukwiphepha lasekunene.
Kule nqaku sijonga iindlela ezinokubakho zokuthengisa ze-B2B ukubandakanya i-bots ngaphakathi kwisicwangciso sabo sentengiso yedijithali.
Funda eli nqaku kwaye unqume indlela oyisebenzisayo ukuze ube nekamva elifanelekileyo kunye neendleko.
Isizathu 1: Sebenzisa iiBhotshi njengesixhobo sokunxibelelana nabaTyeleli
Le yenye yezona zenzo ze-bot zibhaliweyo nezaziwayo onokukhetha kuzo. Inkqubo inokuthatha isixa esikhulu somthwalo womsebenzi ezandleni zakho kwaye inokukulungiselela izibonelelo eziza kuza ngendlela yakho.
Ukuthengiswa kwedijithali kuyiguqule indlela ii-brand ezinxibelelana ngayo nabathengi okokuqala ngqa.
Unxibelelwano ngobuso aluqhelekanga, kwaye amashishini abeka umbono wabo wokuqala kwi-intanethi ngokujonga iwebhusayithi yabo nangomxholo okhoyo kuyo.
Xa abathengi beza kuqala kwiwebhusayithi yakho, ayidingi kuphela imizobo efanelekileyo kunye ne-aesthetics, kodwa bafuna lonke ulwazi olufanelekileyo abalunikiweyo.
Ngamafutshane, baya kufuna iimpendulo zeemveliso kunye neenkonzo ozibonisayo, kunye neenkcukacha zazo naziphi na izaphulelo ezifanelekileyo okanye iipromos. Ukungakwazi kwakho ukubanika ezi mpendulo kuthetha ukuba ulahlekelwe ngumthengi.
Ukunceda bonke abanokuba ngabathengi yinto ephambili enokuba nzima ukuyigcina nokuyilawula xa unentengiso encinci okanye iqela lenkxaso.
Kwakhona, iqela lakho liya kuba nexesha elikhethiweyo lomsebenzi, emva koko abathengi ngekhe kubekho mntu ufumanekayo ukuphendula imibuzo yabo.
Ukwabela abasebenzi bakho iiyure ezahlukeneyo zokusebenza kuya kuthetha ukuba kuya kufuneka ubanciphise abasebenzi abakhoyo ngexesha elinye.
Oku kuyakuthintela ukusebenza ngokukuko kwaye kuya kwenza ukuba ungabinakho ukuphatha ukungena kwabaxumi abafuna ukubuza imibuzo.
Kungothusa uninzi lwabathengisi beli xesha, kodwa abathengi bayayixabisa ingxoxo ephilayo ephendula imibuzo yabo.
Uphando lwakutsha nje olwenziwe yi-Econsultancy lufumanise ukuba phantse 60 ekhulwini Abantu bakhetha ingxoxo ebukhoma kwiwebhusayithi.
Ungaqhubeka nokwenza umyalezo nge-bots ngakumbi kuluntu ngokusebenza kwiimpendulo.
Buza imibuzo kwaye uphuhlise iimpendulo ezingqinelana negama lakho lophawu kunye nemveliso.
Abantu abanakufane basebenzisane ne-bot eqinileyo engabamkeliyo. Unokwenza i-bot yakho yamkele ngakumbi nangakumbi ngokunika umfanekiso weprofayile kunye nomfanekiso wokubonisa.
Ezi zongezo ziya kukhulisa unxibelelwano phakathi kwebhot kunye nabathengi bakho ngokwenza ukuba isebenzisane ngakumbi.
Ukuthetha ngokudibana, ingxoxo ye-Sephora ngumzekelo obalaseleyo webhot osebenzisana kakuhle nabathengi. Ithoni esetyenziswe yi-bot iyabandakanyeka kwaye iyabanceda abathengi batyikitye isivumelwano sabo.
Isizathu 2: Sebenzisa iiBhotshi ukuCoca iiNkokeli zakho
Ulawulo lwenkokeli ngumsebenzi onzima wabaphathi kunye namaqela entengiso ukuphatha. Yonke le nkqubo isekwe kwimvakalelo yakho kunye nokugweba.
Njengelungu leqela lakho lentengiso, kuya kufuneka uqiniseke ukuba wenza umnxeba ofanelekileyo malunga nokukhokelela ekuqhubekekeni ngokuzingisa ngakumbi, kwaye yeyiphi na eyekayo.
Ngokusetyenziswa kwengxoxo, ungongeza isiqinisekiso esikhulu kwezi fowuni. I-Instinct ingangqina ukuba ayilunganga, kodwa i-analytics eqhutywa ziibhothi zencoko ukuze ikulungele ukukhokela kunqabile ukuba ichane.
Khawufane ucinge umthengi omtsha eza kwiwebhusayithi yakho ekwi-intanethi. Abanye banokuba kukuthenga ngefestile, abanye banokuba nomdla wokwenene.
Ukugcina amandla kunye nokubalwa kwabathengi bakho engqondweni, unokwenza uluhlu lwemibuzo enomdla ukumisela ukuba umthengi wakho uphakathi yokuthengisa okanye hayi.
Iimpendulo ezinikezwe kule mibuzo ziya kukunceda ufumane isikhokelo ekufuneka silandelwe.
Kukho i-bots ezilungiselelwe ezikwenzela lo msebenzi. Ezi bots zinceda ukulungiselela imibuzo kwaye emva koko zihlalutye iimpendulo abazinikiweyo ukumisela ukuba ukukhokela kuyalandelwa okanye akunjalo. Driftbot ngu Drift lukhetho olukhokelayo apha ukuba ujonge olu hlobo lwesoftware.
Ngelixa i-bots inokwenza umsebenzi olunge ngokwenene ekufanelekeni nasekukhuliseni ukukhokela, eyona ndlela yokulawula inkqubo kukongeza umnwe womntu ekupheleni kwesivumelwano.
Eyona ndlela iphambili kukuvumela i-bots ukuba ikondle kwaye ikulungele ukukhokela kwaye emva koko ube nenqanaba lomntu xa isivumelwano sele siza kuvalwa.
Inkqubo inokuhlengahlengiswa ukuze ichaze isicwangciso-qhinga sakho sokuthengisa ngexesha elizayo. Kulula kwaye uya kukuvuna.
Isizathu 3: Sebenzisa iiBhotshi njengeNdlela yokuziYalela amava oMsebenzisi
Uphando lwamva nje lufumene ukuba 71 ekhulwini Bonke abathengi bakhetha iindlela zokuthengisa ezizezakho.
Ngapha koko, abathengi bahlala kwaye bafe ngenxa yokwenza umntu, njengoko ibeka ukukhanya kubo. Sele kuyiminyaka, ii-brand bezithengisa oko zikufumanisa zilungile, nangona kunjalo amaqondo ngoku atshintshile kwaye lixesha lokuba abathengi babone ukuba kuthengiswa kuthengiswa ntoni kubo.
Ukugcina engqondweni ukuba abathengi banento yokwenza nokuzenzela, kuya kufuneka uyithathele kuwe ukubanika loo ngqwalaselo. Ngokusebenzisa i-bots, unokunika iimpendulo zabathengi kubakhenkethi bakho.
I-CNN ngumzekelo wejelo leendaba eliphambili elithumela iindaba ezenzelwe wena kubasebenzisi abohlukeneyo ngokusekwe kwiminqweno yabo kunye nokukhetha.
Oku kudala indawo elungileyo kwaye kunceda abathengi bathembele kumnikezeli weendaba ngazo zonke iindaba ezifanelekileyo kubo.
Ulwakhiwo Isisombululo esikhokelayo kwi-Intanethi esikwi-intanethi esinceda amaqela earhente ethengisa izindlu nomhlaba, iiarhente zabarhwebi kunye neearhente zokuphuhlisa iimpendulo ezenzelwe wena kubathengi babo.
Ingxoxo phantsi koLwakhiwo ihamba ngegama lika-Aisa Holmes kwaye isebenza njengearhente yokuthengisa. UAisa Holmes uchonga abathengi kwaye aphendule imibuzo yabo ngethoni ebhalwe igama lomntu.
Isizathu 4: Sebenzisa iiBots kuNxibelelwano oluSebenzayo lweMithombo yeendaba
Unokusebenzisa i-bots kwimidiya yakho yoluntu ukuphendula kunye nokunxibelelana nabathengi ngokuzinikela okufanayo kunye nokwenza ngokwezifiso njengoko unokwenza kwiwebhusayithi yakho.
Zininzi iincoko ezikhoyo zokucoca umyalezo wakho kwi-Slack nakwi-Facebook Messenger. I-bots zemidiya yoluntu zisetyenziselwa ezona zixhobo zikhokelayo, kwaye zisebenza kakuhle.
Isizathu 5: Sebenzisa iiBhotshi njengeNdlela yokuMisela inani labantu
Iibhotshi zinika indlela yokunxibelelana okuhle ukufumana ubume obufunekayo kubathengi bakho, ngaphandle kokubacela ukuba bagcwalise iifom ezinde nezikruqulayo.
I-bot inxibelelana nabathengi bakho ngendlela engaqhelekanga kwaye ivelise ulwazi olufanelekileyo kubemi babo.
Olu lwazi lusetyenziselwa ukunikezela iindlela zokuthengisa ezizezakho kubathengi. Ezi ndlela zokuthengisa zinokuba yindlela elungileyo yokuzisa abathengi abatsha kwi-brand yakho.
Incoko ibonelela ngendawo ekhuselekileyo kubathengi abaninzi apho banokwabelana ngolwazi olunxulumene nabantu babo, ngaphandle kokuziva bengakhuselekanga ngayo.
Ungasebenzisa eli thuba ukuzisa abathengi abatsha kunye nokufumana idatha enxulumene nokubalwa kwabantu abadala.
Okwangoku silindele ukuba uqonde ukubaluleka kweengxoxo kunye nendlela onokuzibandakanya ngayo kwisicwangciso sakho sokuthengisa. Ukuthengisa kwidijithali konke malunga nokungaqheleki kunye nokwenza ubudlelwane kunye nabathengi bakho.
Iincoko zencoko zikunika nje elo thuba, njengoko zikuvumela ukuba uphonononge ii-horons ezinokuthi ngekude ukuba uzilandele.
Amaqela entengiso anokusebenza kunye ne-bots ukwenza isicwangciso sobuchule sentengiso yedijithali.
Ukusebenzisana kunye neeyure ezingama-24 zenkonzo ze-bots ziya kuqhuba kakuhle ngobuchule babasebenzi bakho. Ngale amalgam uya kuba nakho ukuvuna umvuzo wamathuba amakhulu okuthengisa kunye nokuthengisa okuzenzekelayo.
Ngaba ujonge ukuzama ithamsanqa lokubandakanya i-bots ngaphakathi kwesicwangciso sakho sentengiso?
Ukuba ewe, chaza apha ngezantsi usazise indlela ubuchule bethu obunokukunceda ngayo kuhambo oluzayo.
tags: b2bbotsxubusha i botsisizukulwana esikhokelayoisiqinisekiso esikhokelayoukukhokelaukufumana izikhokelo
Iindlela ezi-4 zokuFunda koMatshini kukhulisa ukuThengiswa kweendaba zeNtlalo